TensorFlow: Yakavhurika Sosi Raibhurari yeMuchina Kudzidza | Linux Vakapindwa muropa
TensorFlow: rakavhurika sosi raibhurari yekudzidza kwemuchina
TensorFlow yakavhurika sosi muchina kudzidza raibhurari yehuwandu hwenhamba unoshandiswa mune dhata kuyerera mairafu. Iyo inovandudzwa neGoogle (kunyanya neGoogle Brain timu), yakaburitswa pasi peApache 2.0 rezenisi uye yakanyorwa muC ++ nePython nenzira yekuti inogona kushanda pamapuratifomu akasiyana siyana: Linux, Windows neMac. chirongwa chinonyatso kuzivikanwa chevakawanda vevanhu vasina kubatanidzwa mundima iyi, asi chokwadi ndechekuti chinonakidza.
Chinangwa chechirongwa ndechekuvaka uye kudzidzisa neural network kugadzira AI inokwanisa kuona uye kujekesa mapatani uye kuwirirana, kudzidza uye kufunga. Parizvino inoshandiswa mune mamwe mapurojekiti, kunyange hazvo ichinyanya kushandiswa kutsvagisa. Pakutanga yaingoshandiswa mukati nekambani yekutsvaga injini, asi yakazoburitswa pachena munaNovember 2015 sezvo yaive generic yakakwana kuti ishandiswe mune dzimwe nzvimbo. MunaFebruary 2017, yakasvika vhezheni 1.0 uye inoenderera nekukurumidza kwayo kukurumidza nemipiro kubva kune vese Google nenharaunda iyo zvakare inopa. TensorFlow inogona kumhanya na GPU uye CPU, kunyangwe mune nharembozha uye yakabatanidzwa (yakadzamidzirwa) mapuratifomu, kunyangwe ne tensor kana TPU yekugadzirisa zvikamu, ndiko kuti, chaiyo Hardware yemasvomhu mashandiro erudzi urwu.
Uye zvakare, kune vanogadzira TensorFlow-based application, kune API yepamusoro-chikamu iyo pamwe chete nemakomputa magirafu anotendera inoshamwaridzika uye inoshanduka nharaunda kukudziridza masimba masimba mukati meako gadzira fomati. Saka ini ndinovimba kuti vangangoita chiuru vevashandi vekunze vanoshanda nekodhi pamwe nevemukati vanogona kuramba vachigadzira chirongwa ichi chinonakidza chisingatishandire kune vazhinji vevashandisi, asi kuti nenzira isina kunangana inogona kutibatsira ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » TensorFlow: rakavhurika sosi raibhurari yekudzidza kwemuchina
Zvinhu zvausingazive zvakashanda nekutenda kuLinux
Fedora 27: inowanikwa uye ine nhau kwauri